Isi Shekaụ: Nde naira 3 bụ iji ụkwụ ụkpana tajie eze - BBC News Ìgbò
Isi Shekaụ: Nde naira 3 bụ iji ụkwụ ụkpana tajie eze
16 Febrụwarị 2018
Nkenke aha onyonyo Ugboro ugboro ka ndị agha kwuru na ha egbuola Shekau
Onye ọkacha mara n'okwu nchekwa bụ Adetunji Ajayi, kwuru na nde atọ nke bụ ego ndị agha kwere na nkwa na ha ga-akwụ onye mgbaama ga-agwa ha ebe onyendu ndị Boko Haram bụ Abubakar Shekau nọ bụ ihe na-atọ ọchị.
Ụnyaahụ ndị agha Naijirịa kwuru na ha ga-enye onye ọbụla nwere akụkọ maọbụ ga-agba ama ga-enye aka ịnwụchi onyendu ndị Boko Haram bụ Abubakar Shekau, nde naịra atọ (N3m).
Ajayi onye bụbụ onyeisi agha sị: "Ndị agha anyị na-akpa ọchị."
"Ikekwa, ha ma ebe Shekau nọ, mana ha chọrọ ka ndị nọ ya nso rapụta ya. Ego ha kwuru na ha ga-enye pere oke mpe mmadụ ịbịa tufuo ndụ ya. O kwesiri iru nde naira 50 n'ihi na onye ọbụla ga-enye ụdị ozi ahụ nwere ike ịnwụ. O kwesịrị inye ya ego ga-ezuru ya ịgbapụ ọsọ laa mba ọzọ."
Nwunye dibia Boko Haram achịliela aka elu
Agha iyi ndụ egwu ebibeghị
Ọtụtụ ndị mmadụ kwụnyere n'ihe Ajayi kwuru.
Onye ọkammụta na-arụ na National Defence College, Nigeria, bụ Nnamdị Obasi kwuru sị: "Ọ pụtara na Shekau na-ada n'ọnụ ahịa? N'ọnwa Novemba afọ 2012, gọọmenti Naijiria kwuru na ha ga-enye nde naira 290. N'ọnwa Juun afọ 2013, gọọmenti US kwuru nde dọla 7. Ụnyaahụ Ndị agha Naijiria ekwuo nde naira 3."
Image Copyright @NnamdiObasi @NnamdiObasi
Mana dọkịta Freedom Onuoha, bụ ọkammụta n'ihe gbasara nchekwa ma bụrụkwa onye nkuzi nke Political Science na University of Nigeria Nsukka, kwuru na nkwa ego ahụ zuru ikpalite mụọ ndị nwere ozi maka otu a ga-esi nwụchie Shekau.
"Ọ bụ iji kpalite obi ndị mmadụ inye ozi ga-enye aka ka e jide ya na ndụ."
"Egbuola ọtụtụ ndị na-eso ụzọ ya. Shekau esizighị ike dịka ọ dị na mbụ.
Ọzọ, ọtụtụ ndị Shekau gburu ndị ezinaụlọ ha ga-eji iwe ya na-achọ ụzọ ha ga-esi kwụọ ya ụgwọ. Ha ga-ahụ ya dịka ezi ohere. Nde naira atọ ahụ ga-abụrụ ha ihe mgbakwụnye."
Lee ihe ndị ọzọ na-ekwu n'igwe okwu Twitter:
Image Copyright @PreciousOfLive @PreciousOfLive
Image Copyright @thelanr3y @thelanr3y
Climate Change: mbaụwa ekwekọrịtala